Ogaden News Agency (ONA) – Tigreega oo 3 Uqaybinaya Gobolka Gonder & Axmaarada oo Gadoodsan.
Tigreega oo 3 Uqaybinaya Gobolka Gonder & Axmaarada oo Gadoodsan.
Wararka naga soo gaadhaya wadanka Gumaysiga Itoobiya ayaa sheegaya in taliska wayaanuhuu uu adeegsanayo kaarkii ugu dambeeyay ee uu doonayo in uu kujoojiyo kacdoonada lagaga soo horjeedo. Sida xogta aan kuhelayno taliska wayaanaha oo garwaaq saday in uu kufashilmay joojinta kacdoonada ayaa hada u istaagay sidii uu farsamo cusub ukeeni lahaa.
Warka ayaa intaas kudaraya in talisku uu bilaabay qorshe cusub oo uu ku dhimayo awooda shacabka Axmaarada, wuxuuna talisku kuhowlan yahay sidii uu 3 meelood ugu qaybin lahaa Gobolka Gonder ee woqooyiga Axmaarada oo kamid ah Gobolada ugu mihiimsan dhulka Axmaarada.
Qorshahan cusub ee kooxda TPLF ay dajisay ayaa kadambeeyay kadib markii qoomiyadu Axmaaradu ay noqotay awood aan laloodin karin, waxayna kooxdu aamintay in hadaan ladhimin awooda Axmrada aan talada wadanka lasii haysan karin.
Taliska wakhtigiisii dhacay ee wayaanaha ayaa sameeyay isku day kasta oo uu isleeyahay kacdoonada ayaa lagu xakamayn karaa, wuxuuna talisku mudo dheer kudadaalayay in uu shacabka kala siro isagoo adeegsanaya dhaqaale aad ubadan oo uu dadka ku hunguri galinayao.
Sidoo kale taliska ayaa adeegsanayay siyaasad qaybi oo xukun ah wuxuuna mudo dheer mashquul ku ahaa sidii uu shacabka ukala qaybin lahaa isagoo qoomiyad qoomiyad isaga horkeenay, iskuna hubeeyay si dadwaynuhu ay iyagu isugu mashquulaan.
Dhinaca kale taliska ayaa dhalinta ku hunguri galiyay in uu siin doono shaqooyin iyo waxbarasho, isagoo odayaashana usheegay in uu siin doono dhaqaale badan waa hadii ay damiyaan kacdoonada shacabka ee mudada dheer socda.
Qabiilka Tigreega oo kadambeeya qorshaha lagu kala qaybinayo dhulka Axmaarada ayaa doonaya labo faa’iido oo kala ah in ay qaybta woqooyi ee Gobolka kudaraan dhulka Tigreega si ay xuduud ulayeeshaan wadanka Sudan, iyo in ay yaraato awoodii qoomiyada Axmaarada oo khatar ku ah jiritaanka Tigreega, waa sida ay qabaan e.